Baahin: Arbaca, Nov 16, Weriye Axmed Jookar ~ Daljir ~ Bossaso. Mudanayasha baarlamaanka Puntland oo ka dooday sharciga kalluumaysiga badda; Arday hore loogu diray tacliin sare dalka Turkiga oo dib loogu soo celiyey Somaliya; Shir lagu gorfeeyey hirgleinta mashruuca dhismaha wadooyinka Bossaso oo u furmay madaxda gobolka, ganacsatada, Issimada & ururada rayadka ah. – Radio Daljir
Nofeembar 16, 2011 12:00 b 0
Baahin: Salaasa, Nov 15, Maxamed C. Kooshin ~ Daljir ~ Galkacyo. Dagaal khasaare lixaad leh gaystay oo Muqdisho ku dhex maray Al-shabaab & AMISOM; Guddiga shirka Khaatumo II ee ka furmi doona Taleex oo la iclaamiyey; Puntland oo xirtay wariye u shaqeeya TV-ga Somali Channel; madaxda TV-ga oo xariga sharci darro ku tilmaamay.